Ama-ISOs wokuqala weTrisquel 5.5 akhishwe | Kusuka kuLinux
Ukukhishwa kwe-ISO yokuqala ye-Trisquel 5.5
Maxwell | | Ukusatshalaliswa, I-GNU / Linux, Izaziso
Njengoba kukhangisiwe ku- uhlu lwamakheli ukuthuthukiswa usuku lokugcina 3, izithombe zokuqala ze-beta ze ITrisquel 5.5 «Brigantia» zikhishwe ukuze zihlolwe. Ngosuku oluhleliwe lokuqalisa ngoMashi 24.
Izithombe zokuqala ze-beta zokukhishwa okuzayo kwe-5.5 «Brigantia» zilungele ukulandwa lapha: http://devel.trisquel.info/makeiso/iso/
Ngalesi sikhathi izithombe zifike emuva kwesikhathi kunokulindelekile ngoba inani lezinguquko ezikhuphukayo-ikakhulukazi ukuthuthela kwi-GNOME 3 ne-GTK3- kudinga umzamo omkhulu kakhulu kunokujwayelekile. Babedinga nokuhlolwa okuningi kokuhlanganiswa, lezo zithombe ezingaphelele ze-iso ezadala ukuqagela okungaka… Kepha bekumnandi. 🙂
Ngizobuyela khona ohlwini ngawo wonke ama-iso amasha aqhamukayo
ukuhlolwa. Uhlu lwe-bug olwaziwayo lukhona (sicela ungalihumushi):
Usuku lokukhishwa oluhleliwe nguMashi 24; Ngizobe ngethula okusha
version Engqungqutheleni ye-LibrePlanet ka-2012 eBoston:
Ake siqhekeze ngokulungiswa kwe-bug!
Njengoba kushiwo Rubén, inguquko kusuka ku- I-Gnome enguqulweni 3 kubadalele umsebenzi omningi kunalokho abebekulindele, echaza ukubambezeleka kwayo. Phakathi kwezinto ezintsha sithola okulandelayo:
Ngokusekelwe ku Ubuntu 11.10
El i-kernel I-Linux-Libre 3.0.0
Isiphequluli Umabhebhana 10
Izimbungulu ezaziwayo kuze kube manje:
Izithombe ze-iso zikhulu kakhulu
Isifaki sishayeka khona manjalo (kulungiswe ngo-20120305)
isithonjana sobuningi asikho: http://listas.trisquel.info/pipermail/trisquel-devel/2012-March/000580.html
Imenyu enkulu ayihlanzekile
Imenyu enkulu ikhombisa umcibisholo ngaphezulu kwe-triskelion
Amamenyu awanazo izithonjana
I-Orca ayisebenzi (ihlelwe ngo-20120305)
i-lightdm ayikatholakali ngokugcwele
i-lightdm yehluleka ukwenza i-autologin uma ukufinyeleleka kunikwe amandla
Asikho isihenqo sesikrini
Ikhasi elizenzakalelayo le-Yelp alikho
Igama lengqikithi ye-Gtk ayikhetheki
I-Metacity kufanele ibe nokwakhiwa kunikwe amandla ngokuzenzakalela
Iphaneli kufanele libonakale
qhafaza kwesokudla> Vula ifolda equkethe, ye-Abrowser, kuvela uhlelo lokuqalisa, cela uhlelo ukuvula umkhombandlela wokulanda
IGnash ifakiwe kepha ayilayishi ku-abrowser (ilungiswe ngo-20120305)
Amademoni wevolumu ne-bluetooth gnome awaqali i-gnome-app-install engekho kwimenyu
Sithemba ukuthi maduze I-Brigantia phakathi kwethu, futhi uma ufuna ukusiza ukubika izimbungulu ungalanda isithombe se-ISO kusixhumanisi esingenhla, noma usize ngomdwebo omusha, noma usize ngemibhalo ye-wiki.
Futhi ngalokhu kuphetha le ncwajana encane, ngenkathi sazi ngokukhishwa kwayo okulandelayo. Sifunde ngemuva.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Ukukhishwa kwe-ISO yokuqala ye-Trisquel 5.5
Uwena kuphela osebenzisa lokhu nguRichar Stallman ahahah xD
Cha. Noma ngubani owenze le ndatshana uyayisebenzisa.
Okwesibili: I-RMS isebenzisa i-gNewSense, kepha ivumela iTrisquel.
izimvu ezilahlekile kusho
Bengilokhu ngisebenzisa iTrisquel iminyaka emibili 😛 Iqiniso ukuthi uhlelo oluzinzile lokusebenza (ngokungafani no-Ubuntu) futhi olulula ukulusebenzisa (angikakafundi ukusebenzisa iDebian xD).
Ngiyabonga kakhulu ngesexwayiso. Bengizofometha, kepha uma kuza inguqulo entsha, linda kangcono kuze kube yileso sikhathi.
... kujwayelekile ukufunda ezinkundleni zemibono yabantu abangazi ukuthi bakhuluma ngani, ngezimvu ezilandela ijubane abaziphawulayo kanye nezinsizi ezingenzi imizamo yokwazi izinto ezihlukile ... kepha ezikhuluma ngaphandle kokubona i-trisquel.
I-OMFG, isuselwa ku-Ubuntu ??? I-RS kumele izulazule esihlalweni sayo As ... Njengoba ngikuzwile, ibisuselwa kuDebian, akunjalo?
I-PS: uma ungenza i-athikili ikhulume kabanzi ngale distro kungaba umngane omuhle, hhayi ukuthi ubekezelele ama-neophytes afana nami XD
Njengoba ngangikuqonda, kwakususelwa kuDebian, akunjalo?
Manje uthola ...
Empeleni ekuqaleni ibisuselwa kuDebian, kepha iqembu belikhetha ukususelwa ku-Ubuntu ngoba linamaphakeji amasha. URubén ubuzwe kaningana ngamathuba okubuyela kuDebian, kepha bebeyizingxoxo kuphela.
Njengeqiniso elijabulisayo, ilogo yeTrisquel empeleni iyimiklamo emithathu ye-Debian ejoyine phakathi nendawo.
Yebo, bengicabanga ukuthi kuwuphawu lweCeltic
Ukube bengicacisile ngalolu daba lobuntu, bengizokhuthazeka ukuthi ngiluzame ngaphambi kuka-¬ ¬, kepha lokho kwe-nouveau akungijabulisi kangako ukuthi sithi UU
Le distro imahhala kakhulu kimi, angifuni ukukhumbula abashayeli bamahhala be-radeon xD
Uma kuliqiniso ukuthi uStallman usebenzisa i-gNewSense, kuzofanela ujabulise. Ngoba lokho kusatshalaliswa futhi kusekelwe ku-Debian naku-Ubuntu.
Angiboni mehluko omkhulu, phakathi kukaDebian noma Ubuntu noTrisquel, ngomqondo wokuthi kufaka umhlatshelo noma ukuguqula ube yi-radical. I-distro ezinzile, engasindi, esesikhathini, nazo zonke izinhlelo zokusebenza ezidingekayo.
Kuzwakala kukuhle kimi. Kuzofanele sibone ukuthi kwenzekani ngeGnome 3 ngoba angikaze ngiyisebenzise kuze kube manje.
Sawubona futhi wamukelekile esizeni 🙂
Angizange ngizame iTrisquel, kepha ukusebenzisa ama-Ubuntu repos bekungeke yini kuzuze izimbungulu zayo?
Ngempela, i-distro akuyona into umsebenzisi asebenza ngayo njalo, umsebenzisi usebenzisa izinhlelo zokusebenza, imvelo yedeskithophu, kepha kwabanye kubalulekile ukuthi imvelo yedeskithophu, izinhlelo zokusebenza nemitapo yolwazi kusetshenziswe kanjani, yingakho sibheka ukuthi kubalulekile noma cha amanye ama-distros, yingakho izintandokazi zethu ze-Arch, Debian, Mageia, Fedora, njll.
Kunjalo-ke! I-Debian embi kakhulu isengugogo odonsayo ngamaphakeji ayo we-xD uma ngabe ibingakangeni ku-Debian
Isitebele yebo, kepha ungasebenzisa amanye ama-repos… ukuhlolwa, i-sid, njll
cishe kwenzeka into efanayo .. namanje i-libreoffice 3.5 noma i-vlc 2.0 ayikafiki ekuhlolweni ukusho isibonelo 🙂
ILibreOffice 3.5 ikuSilingo y IVLC 2.0 ikuTesting naseSid
Kuhle lokho…. Lokho kuyangijabulisa kakhulu manje ngiyazibuza ukuthi into efanayo izokwenzeka ngenguqulo entsha yegnome shell 3.5 kulo Mashi 28? Ngiqinisekile hhayi 🙁
Lungisa igobolondo le-gnome 3.4
Angiyena uchwepheshe futhi angikwazi ukunikeza izingxabano zobuchwepheshe, kepha ukuphikisa kuphela kungaba "ukusetshenziswa okulula", kucatshangwa ukuthi i-distro kumele ibe nazo zonke izinzuzo ze-GNU / Linux.
Iziphazamisi angikaziboni kuze kube manje.
Ku-trisquel yami kubonakala kuyindawo enhle kakhulu kepha angiyena umuntu onenkani nenkululeko ephelele ... Ngokuhamba kwesikhathi sonke siyizigqila zekhompyutha xD
Le distro iqale ngokushesha okukhulu ethangeni lami, kepha inkinga yabashayeli yangiphendula ekhanda, uma bengingadingi ukuxhumana okungenantambo, lokhu kungaba yindlela enhle kimi.
Vele, i-100% Isoftware yamahhala: http://www.gnu.org/distros/free-distros.es.html Akukona okwabo bonke abantu.Ukwesaba ukuthi 'ngingalutholaphi usizo kulawo ma-distros amahhala ayi-100%? Yebo, bengibambe iqhaza ku-radiognu.org iminyaka engu-2: http://www.radiognu.org/ lapho bangalalela umculo nezinhlelo 'bukhoma' ku-inthanethi lapho bekhuluma kuphela ngesoftware yamahhala engu-100%. Yebo (kufanele ubheke iDada-Duck-Go!: http://duckduckgo.com/ injini yokusesha engalandeleli ukusesha kwakho) kunesiteshi se-IRC nesiteshi se-freenode lapho kunikezwa khona ukwesekwa. Ngakolunye uhlangothi, bonke abasebenzisi bahlala bethi "Ngisebenzisa isoftware yamahhala, ngisebenzisa iDebian, ubuntu.fedora, iTuquito, njll." Izinkulungwane + ziwumthombo ovulekile osuselwe ezakhiweni eziyishumi ezisetshenziswayo hhayi emazingeni ama-10 enkululeko yesoftware ekhonjiswe yi-RMS. Ngiyakuqinisekisa ukuthi lonke ulwazi onalo ngomthombo ovulekile nezinhlelo nazo zilusizo kakhulu kwisoftware 4 % mahhala kepha akukho ndlela ezokwamukelwa ngayo amabhulokhi okuphathelene ne-kernel, ama-application, ama-addons, i-firmware, njll. Bengisebenzisa i-Free Software kusukela ekupheleni kuka-100
Kunoma ngubani ongabazayo: Yizame.
Sengiyifakile emishinini eminingi vele futhi ayisebenzi kahle kuphela futhi iphakamisa yonke i-hardware ngokuzenzekelayo, kepha ipholile futhi iyasebenza, futhi kumsebenzisi ojwayelekile, kuhle kakhulu. Isebenziseka kalula futhi ilungele ukufakwa ngaphandle kwenkinga encane.
ITrisquel iyi-distro ebeka iSoftware yamahhala (kanye Namasiko Akhululekile) phezulu kakhulu.
Intandokazi yami yalabo abanconywe yiFree Software Foundation yomngani wami uStallman nabo bonke abantu beGNU 🙂
* kahle, ngidinga ukunikeza umhlanga omningi kuParabola, kepha lokho akusebenzi kubasebenzisi abajwayelekile / abasafufusa 😉
Iningi lifundwa ku-Let's Use Linux: February 2012